Filtrer les éléments par date : jeudi, 28 mai 2020
jeudi, 28 mai 2020 22:23
Toaka gasy: Hodinihina ny famokarana sy famarotana azy ara-dalàna
Hiaka-dapa ary isany lahadinika mandritra izao fivoriana ara-potoana voalohan’ny Parlemanta izao ny tolo-dalàna laharana faha 03-2019/PL mikasika ny famokarana sy famarotana ny toaka gasy.
Hodihinina ao amin’ny Antenimierandoholona mandritra izao fivoriana ara-potoana voalohany izao ny tolo-dalàna laharana faha 01-2019/PL momba ny Satan’ny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra izay natolotry ny Solombavambahoaka Razafintsiandraofa Jean Brunel Filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena.
jeudi, 28 mai 2020 22:20
Covid-19: Tanora iray amin’ny enina no tsy an’asa manerantany
Nisy akony ratsy eo amin’ny sehatry ny asa manerantany ny fisian’ny valanaretina Covid-19, ary ny tanora no tena lasibatra amin’izany. Tanora iray amin’ny enina no tsy an’asa araka ny tatitra nataon’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa (OIT).
jeudi, 28 mai 2020 22:18
Covid-19: Norarana ny fampiasana hydroxychloroquine any Frantsa
Nofoanan’ny governemanta frantsay ny alarobia 27 may 2020 ny fanomezan-dalana ny fampiasana hydroxychloroquine nanomboka tamin’ny faramparan’ny volana marsa 2020 hitsaboana ny Covid-19 eny amin’ny hopitaly manerana an’i Frantsa.
jeudi, 28 mai 2020 22:17
Covid-19: Tsisy ifandraisany amin’ny vakisiny ny « essai clinique » izay hotanterahana, hoy i Andry Rajoelina
Nohamafisin’ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly alarobia 27 may 2020 fa ny « essai clinique » izay hotanterahana eto Antananarivo sy any Toamasina, dia protocole faha-3 izay entina hanamafisana ny ady atao amin’ity valan’aretina ity.
Karazam-panafody 2 no hoentina amin’izany, izay mbola tanana ho tsiambaratelo ny anarany, araka ny nifanarahana tamin’ny OMS, ka iarahan’ny siantifika Malagasy misalahy amin’ny OMS, sy Clinique fantadaza any ivelany sy ireo manampahaizana siantifika avy any Etazonia, Azia ary ny Nosy Maorisy.
Tsisy ifandraisany amin’ny vakisiny izay vokarina any ivelany mihitsy ity andrana eny anivon’ny tobim-pitsaboana ity, hoy i Andry Rajoelina fa vokatry ny fikarohana sy fiaraha-miasan’ny siantifika malagasy sy ireo siantifika avy amin’ireo firenena voalaza ireo, ary natao hanamafisana ny fitsaboana sy ireo « protocole » efa napetraka hatrizay teto Madagasikara, indrindra ho an’ireo olona izay taizan’aretina izay misedra ity aretina ity.
jeudi, 28 mai 2020 21:03
Ambatovy: Un vol de Qatar Airways pour le rapatriement de ses collaborateurs ressortissants étrangers
Le premier vol de la compagnie aérienne Qatar Airways a atterri à l’aéroport d’Antananarivo hier. L’avion a été affrété par l’entreprise Ambatovy pour le rapatriement de ses collaborateurs ressortissants étrangers à la destination de Doha Qatar.
jeudi, 28 mai 2020 20:51
Anjiabe - Nosy Komba: Tsy mbola vaky ny tsen-davanila
Tsy mbola hita ny marimaritra iraisana eo amin’ny tantsaha sy ny mpanangom-bokatra amin’ny vidin’ny lavanila maitso. Telo andro androany izao no nisokafan’ny taom-piotazana lavanila aty Anjiabe - Nosy Komba, tsy mbola vaky ny tsena.
240 000 Ar hoy ny mpamboly, 50 000 Ar ny an’ireo mpanangom-bokatra ny 1kg vanila maitso.
jeudi, 28 mai 2020 20:22
Analanjirofo: Nodimandry i Tsaramandihy Honoré Paul, lehiben’ny Faritra
« Misaona Tanteraka ny Faritra Analanjirofo. Nodimandry androany maraina 28 May 2020 ny lehiben’ny Faritra Analanjirofo Atoa Tsaramandihy Honoré Paul raha nanaraka fitsaboana tany Toamasina », hoy ny fampahafantarana nataon’i Angelica Michelle, Solombavambahoaka voafidy tao Fenoarivo Atsinanana sady filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Faritany Toamasina.
Administratera Sivily i Tsaramandihy Honoré Paul. 59 taona izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao.
Andraikitra maro no efa nosahaniny fahavelony, efa Lehiben’ny Distrika tao Sambava (2004-2006), Tsaratanana (2006-2008), Andilamena (2008-2010), Mandritsara (2010-2012), Analalava (2013). Efa Talen’ny fitantanana ny lafintany Faritra Analanjirofo ihany koa ny taona 2013. Ny volana marsa 2019 izy no voatendry ho lehiben’ny Faritra Analanjirofo.
jeudi, 28 mai 2020 20:21
Covid-19: Hiakatra fampanoavana rahampitso Pr Ralandison Stéphan
Nalefa nody ny Pr Ralandison Stéphan, Sojaben’ny Fakioltean’ny sampana fitsaboana Toamasina.
Hiakatra fampanoavana rahampitso maraina zoma 29 mai izy.
jeudi, 28 mai 2020 15:06
Covid-19: Nalefa nody Pr Ralandison Stéphan
Nivoaka ny sampana heloka be vava an'ny Zandary eny amoron-dranomasina Toamasina ny Pr Ralandison Stéphan, Sojaben’ny Fakioltean’ny sampana fitsaboana Toamasina, miaraka amin'ny mpisolovava azy.
Tsy nanao fanambarana izy, fa fisaorana ireo dokotera marobe sy mpiasan'ny fahasalamana tonga nanotrona azy teo ivelany, izay notarihan'ny Filohan'ny CROM (Conseil Régional de l'Ordre des Médecins) sy ny filohan'ny AMELITo (Association des médecins libres Toamasina), no nataony.
Raha ny akom-baovao azo dia mikasika ilay mpitsabo maty voalaza fa nanantona tena tao amin'ny Hopitaly Manarapenitra no nitazonana nanaovana fanadihadiana ity dokotera ity, izay izao nalefa nody izao.
Covid-19: Mifanao fotoana eo amoron-dranomasina Toamasina ireo mpitsabo
Atao fanadihadiana ao amin'ny sampana heloka be vava an'ny Zandary eny amoron-dranomasina Toamasina ankehitriny ny Pr Ralandison Stéphan, Sojaben’ny Fakioltean’ny sampana fitsaboana Toamasina, miaraka amin'ny mpisolovava azy.
Manohana azy tanteraka ireo mpitsabo ary nifamotoana miandry eo ivelany ny dokotera maro tarihin'ny Filohan'ny CROM (Conseil Régional de l'Ordre des Médecins) sy ny filohan'ny AMELITo (Association des médecins libres Toamasina).